2015 March | MoeMaKa Burmese News & Media
ကိုသန်းလွင် – တောအလှု (မိုးမခ) မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၅ (၁) တနေ့ကကျွန်တော့်တူတော်မောင် ရွာသို့ပြန်သည်ကို ကျွန်တော်တို့ စင်္ကာပူ လေဆိပ်သို့ လိုက်ပို့လိုက်ရပါသည်၊ သူသည် ရွာသို့ပြန်၍မြေးကိုရှင်ပြုမည်ဖြစ်သည်၊ သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာမြူးတူးရွှင်ပြ...
ဇင်လင်း – နွေဦးသို့…တမ်းချင်း
ဇင်လင်း – နွေဦးသို့…တမ်းချင်း ((အနာဂတ် မြန်မာပြည်သစ် သို့)) (မိုးမခ) မတ် ၃၀၊ ၂၀၁၅ ― အို…နွေဦး…. လေရူးသုတ်ချီ…မြူပွင့်သီလျှက်.. လက်ဆေးမိုးဖန်…တာသင်္ကြန်… ၀ါကျံရွှေဥ…သရစ်နု…. သစ်ပြု…ဟောင်းပယ်…ပန်းချီခြယ်… ငှက်ငယ်ဥသြ…သံချိုနှော… နွမ်းမောစိတ်ပြေ…အားသစ်ဝေ…...
ကာတွန်း စောငို – ၂၀၁၅ကို အကြို စောငို၏ ကာတွန်းဟောင်းများ (၄)
ကာတွန်း စောငို – ဒို့ကတော့ … ဒို့ကတော့ ။ သြဂုတ် ၁၂၊ ၂၀၁၀ ကာတွန်း စောငို – ၂၀၁၅ကို အကြို စောငို၏ ကာတွန်းဟောင်းများ (၄) (မိုးမခ) မတ်...
နေ၀န်းနီ(မန္တလေး) – သံမဏိ ကြယ် ပြာ
နေ၀န်းနီ(မန္တလေး) – သံမဏိ ကြယ် ပြာ (မိုးမခ) မတ် ၃၀၊ ၂၀၁၅ သူဟာ ခေတ် ဝန် ကိုထမ်း၍ ခေတ် လမ်းကို လျှောက်...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ‘ကယ်တင်ရှင် တပ်မတော်’ ဆိုတာ မရှိပါ
ငြိမ်းချမ်းအေး – ‘ကယ်တင်ရှင် တပ်မတော်’ ဆိုတာ မရှိပါ (သည်လေဒီးစ်နယူးစ် / မိုးမခ) မတ် ၃၀၊ ၂၀၁၅ ဒီဆောင်းပါးကတော့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ဆက်စပ် ပုံနှိပ် ထုတ်ဖြစ်တဲ့ နှစ်ပုဒ်ထဲက ဒုတိယ...
Saw Ngo – 2010 ကာတွန်း စောငို – ၂၀၁၅ကို အကြို စောငို၏ ကာတွန်းဟောင်းများ (၃) (မိုးမခ) မတ် ၂၉ ၊ ၂၀၁၅
၂၀၁၅ မတ် ၂၇၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၊ အကြမ်းဖက်မြန်မာအစုိုးရသံရုံးရှေ့က ဒို့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေ (ဇွန်မိုး) ဇွန်မိုး – မြန်မာပြည်သို့ပေးစာ – ဖက်ဆစ်တို့ရဲ့  ညစာစားပွဲ (မိုးမခ) မတ် ၂၉ ၊...
ကာတွန်း ATH = ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ သဘောင်္မစီးပါ (မိုးမခ) မတ် ၂၉ ၊ ၂၀၁၅
အောင်ဝေး – ဗားတော့ ဗ ရ က် အ တွ က် ပြ ဇာတ် တ စ် ပု ဒ်
အောင်ဝေး – ဗားတော့ ဗ ရ က် အ တွ က် ပြ ဇာတ်...
ရန်လင်းအောင် – ညမဖတ်ရ အမှတ်တရတွေ … …
ရန်လင်းအောင် – ညမဖတ်ရ အမှတ်တရတွေ … … (မိုးမခ) မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၅ ဒီလမ်းက တကယ်ရှည်တယ် သွေးကြောင်နေရင် ပိုရှည်လျားမယ် မင်းပြန်လာမှ ငါရှိမယ် ငါ့ ကို...
ကာတွန်း စောငို – ၂၀၁၅ကို အကြို စောငို၏ ကာတွန်းဟောင်းများ (၂) (မိုးမခ) မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၅
နီဂျူလိုင် – ကြယ်ဖျောက် တစ္ဆေ
နီဂျူလိုင် – ကြယ်ဖျောက် တစ္ဆေ (မိုးမခ) မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၅ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေဟာ စိန်လိုတောက်ပ လမ်းပြလို့ ..။ တစ္ဆေကတော့ တစ္ဆေလိုပေါ့ကြယ်ရောင်ကို မော့မကြည့်ရဲဘူး…။...
ကာတွန်း ATH – စွမ်းအားရှင်ပါတီ က အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွတွေ အလိုရှိသည်
ကာတွန်း ATH – စွမ်းအားရှင်ပါတီ က အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွတွေ အလိုရှိသည် (မိုးမခ) မတ် ၂၈၊ ၂၀၁၅
ငြိမ်းချမ်းအေး – ဖက်ဆစ်တွေရှုံးခဲ့တယ် (မိုးမခ) မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၅ ပြန်ကြားရေးဝန် ဗိုလ်ရဲထွဋ်ကို နိုင်ငံတကာလူထု ပရိသတ်ရှေ့မှာ အရှက်တကွဲ ဖြစ်အောင် တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြဝံ့ခဲ့တဲ့ သတင်းသမားကို ဂုဏ်ပြုစကားဆိုချင်ပါတယ်။ ဒီနေ့...
ငြိမ်းချမ်းအေး – တပ်မတော်နေ့ အမှန်ဖြစ်ရေး အရေးကြီးသည်
ငြိမ်းချမ်းအေး – တပ်မတော်နေ့ အမှန်ဖြစ်ရေး အရေးကြီးသည် (Friday Times / မိုးမခ) မတ်လ ၂၇၊ ၂၀၁၅ • အာဏာရှင်မောင်ပိုင်စီးခြင်းခံရတဲ့ ပုံပျက်သမိုင်း စစ်အာဏရှင်အစိုးရအဆက်ဆက် ‘တပ်မတော်အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမည်’၊ ‘တပ်မတော်သာ...
ကာတွန်း ATH – စွမ်းအားရှင် တပ်မတော်က သင့်ကို မလိုသေး
ကာတွန်း ATH – စွမ်းအားရှင် တပ်မတော်က သင့်ကို မလိုသေး (မိုးမခ) မတ် ၂၇၊ ၂၀၁၅
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Not See The Forest for The Trees
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Not See The Forest for The Trees (အကယ်ဒမစ်ဝိကလီး ဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မတ် ၂၇၊ ၂၀၁၅...